Malunga nathi-Goodao Technology Co, Ltd.
Ishaja yebhetri kunye nokuqalisa kweqonga
Inverter & Umguquli
Umsila kunye nokuKhanya kweNqwelomoya
Imeko engxamisekileyo / izibane zeBeacon
Yasekwa ngo-1995, I-HANGZHOU TONNY EYONYULO KUNYE NEZOBUCHULE CO, LTD.ngomnye wabavelisi abakhokelayo kunye nabathengisi bempahla zombane kunye nezixhobo e China. Umzi-mveliso wethu ubekwe kwiXianlin Zone Zone Zone, kwiSithili i-Yuhang, Hangzhou 311122, Zhejiang ngomhlaba oziimitha ezingama-20,000 kunye nendawo yokwakha eyi-15, 000 yeemitha.
Inkampani yethu igxile ekuyileni, ekwenzeni nasekusasazeni izixhobo zombane zemoto kunye nezixhobo, ezinje ngetshaja yebhetri yemoto, iiververver, iziqalo zomsebenzi, izibane zomsebenzi, izibane zebakhon, abalandeli beemoto, abalandeli be-DC eziphathwayo, imibhobho yomoya, isicoci sokuhamba kwezithuthi, njl njl. Yenza iinkonzo ze-OEM kunye ne-ODM. Umthamo omkhulu wokuveliswa kwemigca eli-14 yendibano, ininzi yoomatshini bokufaka inaliti, kunye nabasebenzi abangaphezulu kwama-450 amandla ethu emveliso asisiseko.ulawulo olukumgangatho olungqongqo, simisele ilebhu yovavanyo yobuchule exhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo eziphambili zokuvavanya kunye nokuhlola. Iqela le-QC & QA yobungcali inokuqinisekisa ukuqhuba i-ISO9001: Inkqubo yolawulo esemgangathweni ye-2015. Ngeli xesha, iqela le-R&D elingaphaya kweenjineli ezingama-20 elinamava lenza iimveliso ezintsha zokubonelela kunye nokubonelela ngenkxaso yezobugcisa emva kwentengiso.
Amashumi amabini amawaka
Indawo yonke yomzi mveliso
Icandelo le-R & D
Inani leenjineli: ngabantu abangama-20
Isoftware yoyilo: Imisebenzi eqinileyo, iPro / E, iRino, njl.
Nika i-OEM kunye ne-ODM kubathengi ngokweesampulu zabo, imizobo okanye iikhonsepthi; Nika izindululo ezifanelekileyo kubathengi ukuze ugcine umgangatho kwaye uhlangabezane neemfuno zentengiso.
IQela loYilo lwe-elektroniki
Isixhobo sokugcina izixhobo
Isityalo seplastiki yenaliti
Umthamo wenaliti weplastiki: 100g ukuya ku-2500g;
Ubungakanani boomatshini: 20+
Umthamo omkhulu wokuveliswa kwemigca ye-14 yendibano kunye nabasebenzi abangaphezu kwe-450 ngamandla ethu emveliso, Iqela le-QC & QA yobungcali inokuqinisekisa ukwenza i-ISO9001: Inkqubo yokulawula umgangatho.
Amandla okugcina iimpahla
Sinendawo yogcino lweemitha ezingama-50 000 eenyawo, dibana nomthengi malunga nokugcinwa
Inkqubo: Inkqubo ye-ERP isetyenziswe ngexesha lonke ikhosi.
Sineqela elinomdla elinamava. Uninzi lwazo luneminyaka engaphezu kwe-15 yamava
Sinokufaka izikhonkwane ze-3x40HQ ngexesha elifanayo.
Isiqulatho sokuGcina iiGates
Besisenza iimveliso ezintsha, kwaye sikhonza abathengi bethu kuzo zonke iimarike zehlabathi. Abathengi bethu ababalulekileyo bafumana ukuthandwa ngakumbi kwihlabathi, njenge Wal-Mart, Autozone, Inkampani yaseScotts, icandelo leAdox Auto kunye neLidl njl.
& YIMA ngoku
Ngemibuzo malunga neemveliso zethu okanye ipricelist, nceda unxibelelane nathi kwaye siya kuba sinxibelelana kwiiyure ezingama-24.
Idilesi:No.1 Jiaqi Road, Xianlin Zone Industrial, Yuhang District, Hangzhou, China